News Collection: नाम गुमाउँदै
कुनै बेला इमानदारीको उदाहरण मानिने नेपालीहरू मुम्बईको अपराध जगत्मा कुख्यात
अन्डरवल्र्डका बादशाह नै मानिने दाउद इब्राहिमका भाइ इकवाल इब्राहिम कास्करका चालक तथा अंगरक्षक अरिफ अलि बेगको हत्या गर्ने नेपाली युवक इन्द्रलालबहादुर खत्री घटनालगत्तै गत ४ जेठमा मुम्बईमा दाउद समर्थकहरूद्वारा समातिए। एक समयमा छोटा राजन समूहका हर्ताकर्ता रहेर आफ्नै समूह बनाएका भरत नेपाली भन्ने भगवन्तसिंह आफ्नै 'पार्टनर' सन्तोष सेट्टीको गोलीबाट नोभेम्बर २०१० मा थाइल्यान्डको पतायामा मारिए।
यी दुई घटनाले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा सक्रिय अपराध जगत् -अन्डरवल्र्ड)का गतिविधिमा नेपालीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्छन्। मुम्बईको अन्डरवल्र्डमा कति नेपाली सक्रिय छन् भन्ने ठोस तथ्यांक त छैन तर त्यहाँका विभिन्न ग्याङ्हरूमा नेपालीको राम्रै उपस्थिति रहेको मुम्बई प्रहरीको भनाइ छ। र, अपराधकर्ममा जेल जाने नेपालीको संख्या प्रतिवर्ष बढिरहेको पनि प्रहरीको दाबी छ।
खत्री र मुम्बईकै मुमरा क्षेत्रका बासिन्दा सइद बिलाल मुस्तफाले दक्षिण मुम्बईको पाकमोडिया स्िट्रटमा रहेको कास्करको घरनजिक प्रहार गरेको गोलीबाट वेग मारिएका थिए। प्रहरीका अनुसार खत्री र मुस्तफालाई छोटा राजन समूहका हर्ताकर्ता उबेदुर रहमानले पेस्तोल दिएर वेगको हत्या गर्न पठाएका थिए। खत्री र मुस्तफाले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार रहमानले दुवैलाई 'अपरेसन' सफल भएपछि १०/१० लाख रुपियाँ दिने आश्वासन दिएका थिए, त्यसैको प्रलोभनमा खत्री वेगको हत्यामा अघि सरेका हुन्।
खत्री माओवादी लडाकूको कैलालीको सहजपुरस्िथत अस्थायी शिविरका बि्रगेड कमान्डर पनि भएको मुम्बई प्रहरीको दाबी छ। कास्करको घरमुनि उभिइरहेका वेगलाई अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेर भाग्ने प्रयास गर्दैगर्दा खत्री र मुस्तफा दुवै समातिएका थिए। उक्त क्षेत्र दाउद इब्राहिमको दह्रो पकड भएको क्षेत्र हो। खत्रीको लडाकू शैलीलाई छोटा राजनले प्रयोग गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। हिरासतमा लिइसकेपछि खत्रीले प्रहरी अधिकृतलाई नै आक्रमण गरेका थिए, अहिले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई असहयोग गरिरहेका छन्।
उता आफूलाई भरत नेपालीकी श्रीमती बताउने नेपाली महिलाले थाइल्यान्डको समुद्रमा भेटिएको उनको शव बुझेकी थिइन्, जसको साथमा नेपालीका एक छोरा पनि थिए। भरतलाई नजिकबाट चिन्ने नेपाली जनसम्पर्क समिति, मुम्बईका एक पदाधिकारीका अनुसार उनका बाबु भारतीय सेनामा थिए। बाबु नोकरीमै छँदा भारतको देहरादुनमा जन्मेका हुन्, उनी। "खासमा उनी नेपाली मूलकै व्यक्ति हुन्," मुम्बईको चेम्बुर इलाकामा भरतलाई पटक-पटक भेटेका उनी भन्छन्, "अछाम जिल्ला पुख्र्यौली थलो भएका भरत दलित समुदायका थिए।" अहिलेसम्म मुम्बईको अपराध दुनियाँमा सबैभन्दा कुख्यात भरत नेपाली नै हुन्। छोटा राजन मलेसिया बस्न थालेपछि मुम्बईमा उनको समूह भरत नेपालीले सञ्चालन गर्ने गर्थे।
भरत करिब १८ वर्ष -सन् १९८३-१९९४) सम्म भारतीय नागरिककै रूपमा भारतीय सेनामा थिए। आर्टिलरी ९५ फिल्ड रेजिमेन्टमा रहेका उनी स्वास्थ्यका कारण सेनाबाट बिदा भएका थिए। उनी मुम्बईको साइनस्िथत धरावीमा बस्थे र उनको खास अड्डा अन्धेरी थियो। चिनियाँ सामानको अवैध व्यापार गर्ने क्रममा उनले आफ्नो ग्याङ् बनाएका थिए। पछि उनको सम्पर्क अन्डरवल्र्डका डन छोटा राजनसँग हुन पुग्यो। सन् २००५ मा राजन समूहबाट छुट्टनिुअघिसम्म उनी अति विश्वासपात्र व्यक्ति थिए।
मुम्बईका नाम चलेका वकिल शाहिद आजमी र छोटा राजनका विश्वासपात्र फरिद तनाशाको हत्याको योजनाकार पनि हुन्, नेपाली। छोटा राजन, भरत नेपाली, सन्तोष सेट्टी र विजय सेट्टी मिलेर समूह बनाएका थिए। तर, त्यसको नेता को भन्ने विवाद चर्किंदै गर्दा यी सबै आ-आफ्नो समूह बनाएर सक्रिय भए। भरत नेपालीले सन्तोष सेट्टीलाई दुवै मिलेर विजय सेट्टीको हत्या गर्ने र दुवै जनाको दह्रो समूह बनाउने योजना सुनाएका थिए। अहिले विजयलाई मार्ने व्यक्तिले भोलि आफूलाई पनि मार्ने खतरा देखेर भरत नेपालीको हत्या गरेको बयान हालै पक्राउ परेका सन्तोषले मुम्बई प्रहरीलाई दिएका छन्।
यी पछिल्ला घटना हुन्, जसले रोजगारको खोजीमा भौँतारिँदै मुम्बई पुग्ने नेपाली युवा त्यहाँका अन्डरवल्र्डको सम्पर्कमा पुगेर अपराधको दुनियाँमा संलग्न हुने गरेको पुष्टि गर्छन्। संसारभर सस्तो कामदारका रूपमा चिनिने नेपाली युवालाई पैसाको प्रलोभनमा अपराधको दुनियाँका नाइकेहरूले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। मुम्बईमा धेरै यस्ता आपराधिक समूह छन्, जसले नेपाली युवालाई प्रलोभनमा पारेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। जस्तो : दाउद इब्राहिमको डी कम्पनी, छोटा राजन, छोटा सकिल, सन्तोष सेट्टी, रवि पुजारी, हेमन्त पुजारीलगायतका हरेक समूहसँग नेपालीहरू जोडिने गरेका छन्। यसरी संलग्न नेपालीहरूको संख्या यकिन छैन। तिनै युवाहरूमध्येका थिए, कमलसिंह नेपाली, जो २४ भदौ ०६३ सालमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा मारिए। सुरुमा छोटा राजन र त्यसपछि दाउदको ग्याङ्मा पुगेका कमलसिंहलाई आक्रोशित राजन समूहले हत्या गरेको थियो।
यस्तै, ०६७ भदौ तेस्रो साता मुम्बई प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका रवि पुजारीको समूहका पाँच सदस्यमध्ये दुई नेपाली थिए। मुम्बईमा फिरौती असुलीलाई व्यापक बनाएका पुजारीविरुद्ध प्रहरीले कारबाही गर्दा सो समूहका पाँच सुटर पक्राउ परेका थिए, जसमा राजु भण्डारी भन्ने हर्कबहादुर लोकबहादुर भण्डारी र परेश भन्ने पिडी नेपाली दुई जना नेपाली नागरिक थिए। थापा उपनामका राजेन्द्र नेपाली, जो पुजारी ग्याङ्का हर्ताकर्ता थिए, लाई प्रहरीले १९ भदौ ०६७ मा इन्काउन्टरमा मारेको थियो। राजेन्द्र पनि नेपाली नागरिक थिए। राजेन्द्र मारिएलगत्तै भण्डारी र पिडी नेपाली पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार यिनै थापाले दुवै युवकलाई अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गराएका हुन्।
अछाम, कुइकाका बालाराम ढकाल पाँच वर्षअघि भतिजा नाता पर्ने व्यक्तिको इँटा प्रहारबाट मुम्बईकै माणिकपुर पेट्रोल पम्पमा मारिए। बब्लु उपनामले चिनिने ढकाल मुम्बईको मूल सहरबाट ५० किलोमिटर उत्तरस्िथत ओसाईबिरारदेखि पालघरसम्म साता असुली गर्ने कुख्यात डन भाइ ठाकुर भन्ने जयेन्द्र ठाकुरका दाहिने हात थिए। आफूले काम गर्ने पम्पमा साता असुली नगर्न गरिएको आग्रह नमानेपछि उनका भतिजाले ढकालको हत्या गरेका थिए। अहिले ढकालको परिवार कैलालीको लम्की आएर बसेको छ।
मुम्बईको अपराध दुनियाँमा नेपाली नागरिक प्रवेश गर्ने क्रमको सुरुवात भने विसं '३० को दशकमै भएको हो। अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने पहिलो नेपाली हुन्, केटी थापा भन्ने खिमलाल तुलसीराम थापा। ११ वैशाख ०४९ मा मुम्बईमा मारिएका थापा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरेका विश्वासपात्र थिए। त्यही सम्बन्धबाट उनी मुम्बईको भान्डुक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म नगरसेवक पनि निर्वाचित भए -हेर्नूस्, बक्स)। खिमलालकै समूहबाट डनका रूपमा अछाम जिल्ला घर भएका रूपा नेपाली उदाए। थापा मारिनुअघि नै प्रहरीले रूपालाई 'इन्काउन्टर' गरिसकेको थियो। मार्सल आर्टका खेलाडी पनि थिए रूपा। "प्रतिपक्षी पार्टीहरूको दबाबमा रूपालाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो," थापाको समूहमा सदस्य रहेर अहिले अपराधको दुनियाँबाट टाढा बसेका मास्टर थापा भन्छन्। केटी थापा डनका रूपमा उदाउनुअघि मुम्बईमा नेपालीहरूलाई 'बहादुर' वा 'कान्छा' भनिन्थ्यो। उनको उदयपछि नेपालीहरू थापाका रूपमा चिनिन थाले। केटी थापाले मुम्बईको भान्डुक, मुलुन्ड र थाना क्षेत्रमा प्रभाव जमाएका थिए।
अहिलेसम्म मुम्बईमा 'डन'का रूपमा चिनिएका नेपाली केटी थापा र भरत नेपाली नै हुन्। अझ भरत नेपाली केटी थापाभन्दा अगाडि गए। यी दुवैको शैली र पहिचान फरक थियो। केटी नेपाली भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे भने भरत नेपाली भने पूर्ण रूपमा आपराधिक गतिविधिमा थिए। 'सुपारी' लिएर मान्छे मार्नु भरतको मुख्य काम थियो। त्यसक्रममा मुम्बईको क्राइम ब्रान्चका एक अधिकृतलाई उनले अन्धेरीमा गोली प्रहार पनि गरेका थिए।
मुम्बई प्रहरीको क्राइम ब्रान्चले वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डेको हत्यामा नेपाली नागरिक प्रयोग भएको दाबी गरेको छ। उनको नाम नारायणसिंह विष्ट बताइए पनि संलग्नताको पुष्टि हुन सकेको छैन। डेको हत्यामा प्रयोग भएको पेस्तोल नेपालबाट मुम्बईसम्म ल्याउन विष्टलाई प्रयोग गरिएको प्रहरीको आशंका छ।
अहिले अन्डरवल्र्डका करिब एक दर्जन समूहमा कति नेपाली युवा संलग्न छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्यांक छैन। यद्यपि, मुम्बई प्रहरीको इन्काउन्टर र ग्याङ्हरूबीचको भिडन्तमा धेरै नेपाली युवकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर, यति नै नेपाली युवा मारिए भन्ने पनि कसैले लेखाजोखा राखेको छैन। संयुक्त नेपाली महासंघ, मुम्बईका एक पदाधिकारी भन्छन्, "पाँच सयभन्दा बढी नेपाली युवा मारिइसकेको अनुमान छ।"
अन्डरवल्र्ड डन छोटा राजन समूहका एक नेपाली युवकको १३ कात्तिक ०६३ मा मुम्बई प्रहरीको इन्काउन्टरमा मृत्यु भयो। शेर्पा नेपाली भन्ने गगनसिंह नेपाली नामका ती युवकलाई अन्धेरीको साकिनाका क्षेत्रमा इन्काउन्टर गरिएको थियो। उनी १८ वटा आपराधिक घटनामा मुम्बई प्रहरीको 'वान्टेड' सूचीमा थिए। सानातिना घटनामा जेल परेका उनको जेलमै राजन समूहका सदस्य डिके रावसँग भएको थियो। जेलबाट निस्कनेबित्तिकै उनी डिकेकै पहलमा राजन समूहमा सक्रिय भएका थिए।
सन् १९९८ देखि २००२ को बीचमा मुम्बई प्रहरीको क्राइम ब्रान्चले ६ सय ५० जनालाई इन्काउन्टरमा मारेको थियो। त्यसैमा परेका थिए, पदमसिंह नेपाली पनि। दाउद इब्राहिमका एक विश्वासपात्र उनी ४ असार ०५९ मा मुम्बईको अन्धेरी क्षेत्रमा मारिएका थिए। उनी १४ वर्षको उमेरदेखि अपराधको दुनियाँमा भए पनि प्रहरीको नजरबाट बच्दै आएका थिए। मुम्बई प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार पदमसिंहले १५ वर्षको उमेरमै आफ्नो विरोधी समूहका विकास सावन्तलाई रामपुरी चक्कु प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए। यसबाहेक १९८५ मा अशोक सेम्ब्या र सुनील टिपलगायतको हत्यामा पनि पदमसिंहको संलग्नता खुलेको थियो। व्यापारीहरूसँग साता असुली गर्नु र भाडामा हत्या गर्नु उनको मुख्य पेसा थियो।
मुन्ना सिंह नामका नेपाली पनि मुम्बईमा दादागिरीमा संलग्न थिए। दादागिरीको दुनियाँ छोडेर कैलालीको टीकापुरमा आएर बसेका मुन्नाको चार वर्षअघि टीकापुरमै कालगतिले मृत्यु भयो।
"मुम्बईमा नेपालीहरू बिगि्रन थालेको दुई दशकभन्दा बढी भएको छैन," प्रवासी नेपाली संघ, भारतका विष्णु गिरी भन्छन्, "इमानदारीमा ख्याति कमाएका नेपालीहरू अहिले बदनामीको शिखरमा पुगेका छन्।" नेपालीलाई सस्तो मूल्यमा प्रयोग गर्न सकिने मुम्बईमा सक्रिय आपराधिक सञ्जालले पनि बुझेका छन्। १०-२० हजार रुपियाँमै नेपाली युवाबाट अपराध गराउँछन् र आफू उम्किन्छन्। नेपाली भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै प्रहरीले पनि उनीहरू निर्दोष हुनसक्ने कुरातर्फ ध्यान दिँदैनन्। गिरीका अनुसार नेपाली युवाले सानोतिनो अपराध गरे भने पनि मुम्बईका धेरै नेपालीले दु:ख पाउँछन्, प्रहरीबाट।
अहिले भारतले २२ जना नेपाली नागरिकविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ, जसमा पाँच जनामाथि हत्या अभियोग छ। मुम्बई प्रहरीका अनुसार रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका अधिकांश अभियुक्त विभिन्न समूहमा आबद्ध छन्। अपहरण, फिरौती, चोरीलगायतका अपराधमा ती नेपाली युवा भारतमा वान्टेड छन्। "सानादेखि ठूला अपराधसम्म नेपाली युवा संलग्न छन् तर ती सानो संख्यामा छन्," मुम्बई प्रहरीको क्राइम ब्रान्चका डेपुटी कमिस्नर निसार तम्बोली भन्छन्, "गल्लीका डनहरू बाँकी छैनन् तर साना अपराधबाट सुरु गरेर ठूला आपराधिक समूहसँग नाता गाँस्न पुग्ने नेपाली युवाको समस्या चर्को छ।"
को हुन् केटी थापा ?
पहिलोपटक केटी थापा भनिने खिमलाल तुलसीराम थापाले जेलबाटै चुनाव जितेका थिए। उनका बाबु तुलसीराम मुम्बईमा एचएसबीसी बैँकमा चौकीदार थिए। केटी मुम्बईमा नै जन्मेका हुन्। छरितो शरीरका उनी मुम्बईको परेल लालबाग क्षेत्रमा हुर्केका हुन्। त्यसबेला परेल लालबाग दादागिरीको नम्बर १ क्षेत्र थियो, त्यहीँबाट शिवसेना स्थापना भएको हो। केटी कबड्डीमा भारतका राष्ट्रिय खेलाडी थिए। बाबुको मृत्युपछि उनले पनि केही समय एचएसबीसी बैँकमा चौकीदारी गरे। तर, आफूसँग ८-१० जनाको हतियारधारी ग्याङ् लिएर ड्युटीमा जाने उनीबाट आत्तिएर बैँक व्यवस्थापनले घरमै तलब पठाइदिने भन्दै उनलाई नोकरीबाट हटायो। त्यसपछि उनलाई भान्डुक क्षेत्रको शिवसेनाको प्रमुख बनाए, बाल ठाकरेले। शिवसेना प्रवेशपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय भए। भान्डुकपूर्वमा अहिले उनको घर रहेको सडकलाई केटी थापा मार्ग नामकरण गरिएको छ।
ठाकरेको विश्वासपात्रको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै थापा अन्डरवल्र्डको सम्पर्कमा पुगे। सुरुमा दाउद इब्राहिम र छोटा राजनको संयुक्त डी कम्पनीमा प्रवेश गरेका उनी दाउद र राजनमा तिक्तता बढेपछि राजनलाई साथ दिन पुगे। उनी 'डन'का रूपमा मुम्बईको भिक्टोरिया टर्मिनल -हाल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) क्षेत्रदेखि नासिकसम्मको साता असुली गर्थे। आफ्नै ग्याङ्का सदस्य गुरु सटमको गोलीबाट उनी मारिएका थिए। सटम अहिले आफ्नै ग्याङ् बनाएर सक्रिय छन्। सटमले केटीलाई मार्नुको कारण भने अनौठो थियो। नगरसेवक बनेपछि उनको प्रहरीसँग हिमचिम बढेको थियो। प्रहरीसँग मिलेर आफ्नो समूहलाई बचाउने र विरोधी समूहलाई इन्काउन्टरमा सिध्याउने खेलमा लागेको भन्दै दाउदकै निर्देशनमा केटीको हत्या भएको थियो। यद्यपि, हत्या गर्ने सटम त्यतिबेलासम्म उनकै ग्याङ्मा थिए।
आफ्ना विरोधी सिध्याउने अभियानमा रहेका केटीले कुनै दिन आफूलाई सिध्याउने त्रासका कारण सटम दाउद इब्राहिमको समूहसँग नजिकिए। दाउदको निर्देशनमा केटीको हत्या गरिएको आशंका प्रहरीले गर्दै आएको छ। तर, केहीको शंका बाल ठाकरेतिरै छ, जसले केटीलाई त्यो उचाइ दिए। दिन दुईगुना रात चौगुना बढिरहेको केटीको लोकपि्रयता र शक्तिबाट आत्तिएर ठाकरेले गुरु सटमलाई प्रयोग गरेर उनको हत्या गराएको आशंका पनि छ।
केटीकी श्रीमती मोमिला, दिदी सीता मुखिया र दुई छोरा अहिले भान्डुकमै बस्छन्। उनको हत्यापछि शिवसेनामा रहेको गुटबन्दीले उक्त पार्टीबाट मोमिलाले टिकट पाइनन् तर पनि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भान्डुकको नगरपरिषद् सदस्य चुनिइन्।
चोरी र हत्यामा पनि
१३ भदौमा दुई नेपाली युवकले मुम्बईको जुहु क्षेत्रमा आफ्नै मालिककी श्रीमती र आफूसँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेर फरार भएका छन्। जुहु पोलिस चौकीका प्रहरी अधिकृत सागर सालुंकेका अनुसार कैलालीको ओलानी घर भई विगत पाँच वर्षदेखि घरमा काम गर्दै आएका रामसिंह बधेला, २६, र टेकसिंह बधेला, २८, ले जय जगदीश सोसाइटीको भुइँ तल्लामा बस्ने कविता सूचक, ४६, र सँगै काम गर्ने प्रकाश बागवे, ३६, को हत्या गरेर फरार भएका हुन्। हत्यापछि घरमा रहेका नगद र गरगहना लिएर दुवै जना फरार छन्।
नेपाली युवाले मुम्बईमा गरेको अपराधको यो सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो। गत २७ वैशाखमा गोरेगाउँनजिक एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो। त्यसका योजनाकार पनि नेपाली युवक नै थिए। सुरज नेपाली नामका ती युवक २० असारमा मुम्बई प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। युवतीलाई मोटरसाइकलमा राखेर गोरेगाउँनजिक फिल्म सिटीको जंगलमा पुर्‍याउने र सामूहिक बलात्कार गर्ने घटनाका मुख्य मतियार थिए, सुरज। उनीसहितका पाँच युवाले पालैपालो बलात्कार गरेर एकअर्काको भिडियोसमेत तयार गरेका थिए, जसलाई मोबाइलको ब्लुटुथबाट आफैँले व्यापक बनाए। उक्त भिडियो एनडी टीभीले सार्वजनिक गरेपछि घटनाको पर्दाफास भयो। बलात्कारमा संलग्न आफ्ना चार साथीसहित सुरज अहिले जेलमा छन्।
त्यसअघि एक नेपाली युवकले गरेको चोरी र हत्याको घटनामा कान्दीवेलीबाट प्रकाशित हुने नेपाल न्युज दैनिकको टिमसमेत तानिएको थियो। स्थानीय एक परिवारमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत बहादुरसिंह कठायतले सोही घरमा काम गर्ने महिलाको हत्या गरेर एक किलो वजनका गरगहना र नगद २४ लाख रुपियाँ लुटेका थिए। लुटिएको नगद र गरगहना रहेको झोला ल्याएर उक्त दैनिकको कार्यालयमा काम गर्ने भीम कठायतलाई जिम्मा लगाएका थिए। दैनिकको टिमलाई शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरिएको सम्पादक भूमिलाल पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, "प्रहरी आएर झोला खोल्दा मात्र घटनाको पर्दाफास भयो।" त्यसलगत्तै पक्राउ परेका बहादुरलाई स्थानीय सेसन कोर्टले जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ।
यस्तै, २ भदौमा पनि पुना प्रहरीले चार नेपाली युवालाई चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरू सबै निजी कम्पनीमा सुरक्षा गार्ड थिए। पक्राउ पर्नेहरूमा नवराम टीकाराम जोशी, २६, काशीराम मोतीराम भण्डारी, ३६, चैतराज देवीराम भण्डारी, २२, र दीपक जोशी छन्। उनीहरूले विभिन्न समयमा लुटेको रकम आफ्नो पुख्र्यौली थलोमा पठाइसकेको प्रहरीको दाबी छ। यसैगरी, एक महिनाअघि बान्द्रानजिकको खार क्षेत्रमा एक व्यापारीको घरबाट करिब ६० लाख नगद र गरगहनासमेत गरी करिब डेढ करोडको चोरी भएको छ। उक्त चोरीमा पनि नेपाली युवकको संलग्नता पुष्टि भएको छ। यद्यपि, उनी उम्किने आशंकामा प्रहरीले नाम र ठेगाना सार्वजनिक गरेको छैन।
बलिउड नायक ऋतिक रोशन, नायिका श्रीदेवी, संगीत निर्देशक अमर हल्दिपुरा तथा नायक सलमान खानका एक साथी पनि नेपाली युवाले गरेको चोरीको सिकार भइसकेका छन्। यस्तै, नायिका हेमा मालिनीको मलाड दिनदोषीस्थित घरमा १८ फागुन ०६६ मा नेपालीले चोरी गरे। छोरी इशा देवलका लागि हेमाले उक्त घर लिएकी थिइन्। हेमाको घरमा चोरी गर्ने पाँच नेपाली युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विनोद शाही, मनोज शाही, ठपेन्द्र शाही, मनबहादुर शाही र वीरबहादुर बटाला छन्।
त्यति मात्रै कहाँ हो र ! शिवसेनाका तर्फबाट महाराष्ट्रका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हाल कांग्रेस आईका तर्फबाट महाराष्ट्रका मन्त्री नारायण राणे पनि विश्वास गरेर घरमा राखेका नेपाली युवकबाट लुटिएका छन्। उनले आफ्नै परिवारको सदस्य बनाएर पालेका नेपाली युवक करिब एक करोड रुपियाँ चोरेर नेपाल भागेका छन्। राणेको घरमा चोरी गर्ने ती युवक स्याङ्जाको गेजा गाविसका हुन्। अहिले उनी बर्दियामा बस्दै आएको मुम्बई प्रहरीका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
यस्तै, पूर्वविधायक नन्दकुमार काडेको घरबाट पनि नेपाली युवकले करिब पाँच करोड रुपियाँ चोरी गरेका छन्। उनलाई रघुअशोक गिरीको समूहले चोरी गर्न उक्साएको थियो। प्रहरीले चोरी गर्ने ती युवकको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन। गिरी समूहकै उक्साहटमा वकिल पन्नीकरको घरमा काम गर्ने अर्का नेपाली युवकले पनि चोरी गरेका छन्। करिब ३० लाख रुपियाँ बराबरको चोरी भएको रिपोर्ट काडेले प्रहरीमा गरेका छन्। ओसाईको एक बिल्डिङ्मा चौकीदार रहेका नेपाली युवक राकेशबहादुर र जंगबहादुरको नामले समेत चिनिने जंगदलसिंह भण्डारीले सोही बिल्डिङ्मा बस्ने समिम मोदी नामकी महिलाको फ्ल्याटमा प्रवेश गरी उनीमाथि हातपात गरे। र, ८ साउन ०६६ मा भएको घटनामा मोदीको पर्समा भएको करिब २ हजार ५ सय रुपियाँ लिएर भण्डारी फरार भए। भण्डारी बर्दियाको बग्नाहा गाउँका बासिन्दा हुन्।
अछामको कुइका गाविस-४ का कमलबहादुर चलाउनेले गत १४ साउनमा मुम्बईको दहिसर क्षेत्रका व्यापारी शैलेशभाइ शाहको घरबाट करिब साढे दुई लाख रुपियाँ बराबरको नगद र गहना चोरी गरे। घरेलु कामदारका रूपमा रहेका चलाउनेले शैलेश र उनकी पत्नीलाई दूधमा विषालु पदार्थ राखेर बेहोस बनाई उक्त चोरी गरेका थिए। कमल अहिले फरार छन्।
घरमा सुरक्षा गार्ड राखिएका नेपालीहरूले चोरी गर्नुको कारण भने अनौठो छ। केही नेपाली व्यापारी मुम्बईमा सुरक्षा एजेन्सी चलाएर बसेका छन्। यस्ता एजेन्सीमार्फत सुरक्षा गार्ड बनेका नेपाली युवालाई समयमा तलब त दिइँदैन, तलब माग्नेहरूलाई थोरै रकम दिएर टार्ने गरिन्छ। "खानै नपाएपछि चोरसँग मिल्नुको विकल्प हुँदैन," चौकीदारी गर्दै आएका कैलाली, बलिया-७ का टीकाराम खनाल भन्छन्। काम नपाएर मुम्बई आउने यस्ता युवालाई गाउँमा तास, जुवा खेल्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने बानी लागिसकेका हुने गर्छन्।
अहिले थाणे जिल्लाको जेलमा मात्र १३ जना नेपाली युवा थुनिएका छन्। उनीहरूमध्ये आठ-नौ जनालाई डकैती र चोरीको आरोप छ भने चार जनालाई हत्याको आरोप छ। अधिवक्ता पद्मा खड्का ठाकुरका अनुसार, महाराष्ट्रका २८ जिल्ला र सात क्षेत्रका हरेकजसो जेलमा नेपाली छन्। मुम्बई बृहत् महानगरका जेलहरूमा मात्र करिब एक हजार नेपाली थुनिएका छन्। जस्तोः थाना जेलमा करिब २५ जना थुनिएका छन्। यस्तै, भाइखला जेलमा ४० महिला र अर्थर रोड जेलमा ६० जना नेपाली युवा छन्। जेल परेका अधिकांश नेपालीमाथि चोरीको अभियोग छ।